Lagni Awaash guutuun jiraattoonni kumni 32 ol qa’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’an. Naannoo Afaaritti lagni Awaash guutuun jiraattoonni kumni 32 ol qa’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’uu Biiroon Ittisa Balaafi Wabii Nyaataa naannichaa beeksise. Lagni Awaash hammaa ol guutuun jiraattoonni aanaalee 6 qa’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’uu daayreektarri akeekkachiisaa duraafi deebii hatattamaa naannoo Afaar obbo Aydaahiis Yaasiin ibsaniiru. Akka ibsa daayreekterichaatti naannichatti aanaaleen naannoo laga Awaash jiran 7 balaaf saaxilamoodha. Rakkoo kana furuuf Abbaan Taayitaa Yaa’a Laga Awaash qaamoolee federaalaafi naannoo waliin qindoominaan lolaa ittisuuf hojjetus ganni bara kanaa cimaa ta’uu isaan aanaaleen 6 balaa lolaaf saaxilamuu himaniiru. Aanaalee kanneeniitti qabeenyarra miidhaa guddaan qaqqabuu obbo Aydaahiis ibsaniiru. Jiraattoota aanaa Aysaa’iitaa gandoota lama keessa jiraataniif mootummaan federaalaa Heeliikooptaraan namoota kuma 1fi 100 miidhaan nyaataa dhiyeessaa jiraachuu ibsameera. Namoonni kumni 17fi 450 ol aanaa Aysaa’iitaa gandoota 5 keessaa kan buqqa’aniidha. Dilbata darbee eegalee namoonni kumni 1fi 126 bishaaniin marfamanii jiraachuu himameera.
Naannoo Afaar yaa’a gara gadii Awaashitti namoonni kumni 63 balaa lolaaf saaxilamoo yoo ta’an, namoonni kumni 44 qa’eefi qabeenya isaanirraa buqqa’u danda’u jedhame.